Tsy mifanaraka amin’ny isan’ny mponina anefa amin’ny ankapobeny ny isan’ny mpitandro ny filaminana, antony mampirongatra ny tsy fandriampahalemana manerana ny tanana. Anisan’ny nahazoana fitarainana ohatra vao tamin’ny faran’ny herinandro teo ny kaominina Tanjombato. Vao maizimaizina kely dia manao ny hataony ny mpanendaka hany ka miaina anaty tebiteby lava ny mponina. Vao omaly ihany koa dia nitrangana fahafihana mahery vaika teny Alakamisy Fenoarivo. Manoloana izany dia hanatanteraka fivoriana maika rahampitso Alarobia ireo tompon’andraiki-panjakana isan-tsokajiny ao Atsimondrano hotahirihin’ny solombavamvahoaka. Tanjona ny hahafahan’ny rehetra mitady paikady ho enti-mamomgotra ny tsy fandriampahalemana eny Atsimondrano, indrindra amin’izao fotoanan’ny fihibohana tsy mampisy ny asa fitadiavana izao.